Visa yaseSingapore | Ikhadi leTourist laseSingapore | natvisa.com
Isicelo seVisa saseSingapore kwi-Intanethi
I-ICA) isungule i-e-service ezinokuthi iindwendwe ziyisebenzise ukufumana iKhadi lokufika le-SG ukuya eSingapore. Inkqubo entsha yaziswa ukwenza kube lula ukuba abahambi bafake izicelo kwaye bafumane olu xwebhu ngokufanelekileyo. Yonke le nkqubo inokwenziwa kwi-intanethi. Kanye ukusuka ekufakeni isicelo soxwebhu lokuhamba ukuze ulufumane, iindwendwe zinokwenza yonke into yenziwe kwi-Intanethi. Elona candelo lililo malunga ne-e-service esandula ukwaziswa kukuba abafaki-zicelo ngoku akukho mfuneko yokuba batyelele kwindlu yozakuzo ukuze bafumane uxwebhu. Bafuna kuphela ukufaka isicelo sekhadi lokufika kwaye baya kuthunyelwa nge-imeyile kumenzi-sicelo. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba iKhadi lokuFika le-SG ayililo endaweni yoxwebhu oluthile okanye enye ye-visa. Ke ngoko abemi bamanye amazwe banokufumana zombini, iKhadi lokuFika, kunye ne-visa, yokungena eSingapore.
Iindidi zeVisa zaseSingapore
Ikhadi lokufika Imeyli - Ukufikelela kwiintsuku ezingama-14 enye Faka isicelo ngoku
Ukufumana ikhadi lokufika kwe-SG, abafaki-zicelo kufuneka banikeze ipasipoti efanelekileyo. Ipaspoti kufuneka isebenze iinyanga ezi-6 okanye ngaphezulu. Ukuskena ipasipoti kufuneka kube kwifomathi yeJPG, JPEG kunye nePNG xa ufaka isicelo sokufumana ikhadi lokufika.
Abafakizicelo kufuneka benze i-imeyile xa befaka isicelo sekhadi lokufika eSingapore. Nje ukuba kungeniswe ifom yesicelo, naluphi na uhlaziyo olunxulumene nalo luya kuthunyelwa kule dilesi ye-imeyile kunye nekhadi lokugqibela lokufika le-SG. Ngenxa yoko, wonke umntu ofake isicelo kufuneka anikezele nge-id esebenzayo ye-imeyile ngexesha lenkqubo yokwenza isicelo.
Ikhadi lokufika laseSingapore
Xa befika eSingapore, abahambi kufuneka bangenise iKhadi labo lokuFika kwabasemagunyeni. Emva kokujonga olu xwebhu, abantu baya kuvunyelwa ukuba bangene kweli lizwe.
Ngelixa abemi bamazwe athile bangena eSingapore kunye nekhadi labo lokufika, abanye baya kuvunyelwa ukuba bangene kummandla wesizwe waseSingapore kuphela emva kokuba beveze i-visa yabo kwaye kwezinye iimeko, zombini visa kunye nekhadi lokufika.
Ukuqala kobhubhane weCovid-19 kukhokelele ekungenisweni komgaqo omtsha apho umntu ngamnye, emva kokufika eSingapore, kufuneka angenise uxwebhu lweSibhengezo seMpilo.
Xa abahambi befika eSingapore, kufuneka babonise ipasipoti yabo esemthethweni. Ipasipoti abayibonisayo kufuneka ibe yile isetyenziswayo xa kuzaliswa ifom yesicelo. Kufuneka isebenze ubuncinci iinyanga ezi-6 okanye nangaphezulu.
Iinkcukacha zekhadi lokufika eSingapore
Yintoni i SG Electronic Ukufika Card?
Ikhadi lokufika ngombane le-SG yinkqubo esandula ukwenziwa evumela abahambi bamazwe ahlukeneyo ukuba bafumane imvume yabo yokuya eSingapore kwi-intanethi. Inkqubo yaziswa ngo-Matshi 2020 kwaye ikhokelele ekuyekisweni kwekhadi eliqhelekileyo lephepha. Nje ukuba umhambi alufumane olu xwebhu, bavunyelwe ukuba bangene kweli lizwe kwaye bahambe kumhlaba welizwe labo, ngaphandle kwengxaki. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba iKhadi lokuFika leKhompyutha le-SG alikho endaweni ye-visa. Abemi bala mazwe abambe amaxwebhu afunekayo okuhamba ngevisa kufuneka bafumane i-visa evunyiweyo yokungena kweli lizwe. Nge-Covid-19, ubhubhane oqhubekayo, abafaki-zicelo kufuneka bafumane isiBhengezo sezeMpilo sokungena eSingapore.
Ungasifaka njani isicelo seKhadi lokuFika laseSingapore?
Ukufaka isicelo kwikhadi lokufika laseSingapore kulula kakhulu kwaye kulula. Inkqubo epheleleyo yesicelo inamanyathelo ama-3 kuphela. La manyathelo alandelayo:
Gcwalisa ifom yesicelo: Okokuqala kwaye okuphambili makugcwaliswe ifom yesicelo. Zonke iinkcukacha ezinjengeenkcukacha zohambo, iinkcukacha zakho kunye nalo lonke olunye ulwazi kufuneka luzaliswe ngokuchanekileyo. Nje ukuba ifom igcwaliswe, kufuneka ingeniswe.
Ngenisa uxwebhu olufunekayo: Kunye nefom yesicelo, abafaki-zicelo bayacelwa ukuba bangenise ikopi ekhutshiweyo yepasipoti yabo, ekufuneka isebenze iinyanga ezi-6 okanye nangaphezulu. Uxwebhu lokuhamba kufuneka luskenwe kwifomathi yeJPEG, PNG okanye yeJPG.
Intlawulo yekhadi lokufika laseSingapore: Emva kokuba ifom kunye noxwebhu lungenisiwe, abafaki-zicelo kufuneka bahlawule umrhumo. Abafakizicelo banokusebenzisa ikhredithi esebenzayo okanye ikhadi lebhanki kwinkqubo yokuhlawula.
Emva kokuba kusetyenzwe ikhadi lokufika, ifomathi yePDF iya kuthunyelwa ngeposi kubafaki-sicelo, ekufuneka bayikhuphele kwaye bafumane iprintawuthi.
Imiyalelo yaBatyeleli abafaka isicelo seKhadi lokuFikela laseSingapore
Ngaphambi kokufaka isicelo seKhadi lokuFika laseSingapore, kuyacetyiswa ukuba ujonge ukuba ngaba abafaki-zicelo banephepha lokundwendwela elifunekayo. Ukuba kunjalo, abafaki-zicelo kufuneka benze isicelo se-visa.
Ukufumana i-visa okanye ikhadi lokufika le-SG akuqinisekisi ukungena eSingapore. Abasemagunyeni kwisikhululo seenqwelomoya banelungelo elipheleleyo lokungavumi ukungena kumntu othile ukuba bafumana nawuphi na umba nolu xwebhu okanye babona isoyikiso kukhuseleko lwelizwe.
Yintoni iKhadi lokufika le-SG?
Ikhadi lokufika le-SG luxwebhu lokuhamba olunokufunyanwa kwi-intanethi ngabahambi ukutyelela iSingapore.
Umenzi-sicelo uza kulifumana njani iKhadi lokufika le-SG?
Abafake izicelo kufuneka bafake isicelo seKhadi lokuFika kwe-SG kwi-Intanethi. Nje ukuba isicelo senziwe, uxwebhu luya kuthunyelwa nge-imeyile.
Ngaba ikhadi lokufika lithatha indawo yevisa?
Hayi, iKhadi lokufika le-SG ayililo endaweni ye-visa. Abemi bezinye iintlanga kufuneka bafumane i-visa yokungena eSingapore.
Yintoni ekufuneka ibonelelwe xa usenza isicelo seKhadi lokufika le-SG?
Abafaki zicelo kufuneka banikeze ipasipoti yabo esemthethweni ngelixa befaka iKhadi lokufika le-SG.
Ngawaphi amaxwebhu ekufuneka ebonisiwe xa ufikelela kwisikhululo seenqwelomoya saseSingapore?
Ababhenkethi kufuneka babonise ikhadi labo lokufika le-SG, iSibhengezo sezeMpilo, ipasipoti esemthethweni kunye nevisa evunyiweyo (yabemi abafuna uxwebhu lokuhamba).
Ngaba abahambi baya kufumana nayiphi na imbuyiselo, ukuba isicelo sabo saliwe?
Hayi, abafaki-zicelo abayi kufumana mbuyekezo, ukuba isicelo sabo saliwe.
Ngaba ukufumana iKhadi lokufika le-SG kukuqinisekisa ukungena eSingapore?
Hayi, abahambi banokumiswa ngabasemagunyeni ukuba bangene kweli lizwe ukuba bafumana nawuphi na umbandela ngala maxwebhu abonisiweyo.
Mangaphi amangenelo avunyelweyo ngeKhadi lokufika laseSingapore?
Ngekhadi elinye lokufika laseSingapore, abahambi bavunyelwe ukungena kube kanye.
Umfaki-sicelo uza kulifumana phi ikhadi lokufika kwakhe?
Abafakizicelo baya kufumana iKhadi labo lokufika eSingapore kwi-imeyile ye-imeyile.